ထီဖွင့်တဲ့ မနက်မှာ ဘဝကို ပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ ဖုန်းတကော – Myanmar Update News
ဖုန်းသံမြည်လာလို့ ကြည့်လိုက်တော့ နံပါတ်ကအစိမ်းကြီး ဘယ်ကပါလဲဆိုပြီး ဖုန်းကိုင်လိုက်တော့… “ဟယ်လို ထီဆိုင်ကပါခင်ဗျ…” ဝုန်းကနဲထထိုင်လိုက်ပြီး ကတုန်ကရင်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်တွေကြောင့် စကားလုံးတွေတောင် ရစ်သမ်မမှန်ချင်တော့ပါ။
“ဟယ်လို ဟယ်လို ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ” “ထီဆိုင်က ထီများထိုးထားသေးလားဗျ” “ဟာ…ဟုတ် ထိုးတာပေါ့ဗျာ အဲ့ထီသည်ဆီက ကျွန်တော်လတိုင်းထိုးတာဗျ ဒီတစ်ပါတ်မှာလည်း ထိုးထားပါတယ်ဗျ…”
စကားတွေကရားရေလွှတ်တွေပြောမိပြီး ရင်တွေကလဲခုန် အင်း ခြေထောက်တွေပါတုန်နေတာဗျတစ်ဖက်က ပြောလာမယ့် စကားကို ရင်မောစွာ စောင့်နေမိ ခေါင်းထဲမှာရော မျက်လုံးထဲမှာပါ တိုက်တွေပေါ်လာလိုက် ၊ ကားတွေမြင်လိုက်နဲ့ပေါ့ဗျာ။ဟီးဟီး…ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ
“လူကြီးမင်း အဲ့ဆိုင်က ထီထိုးထားသာ သေချာရင်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး အဲ့ထီသည်ဦးကြီး ကိုဗစ် ကူးစက်ခံထားရပြီမို့ သူ့ထံမှ ထီထိုးထားသူအားလုံး ၂၁ ရက် Q ၀င်ရပါမယ် ဆေးစစ်ရပါမယ်….. အခုပဲလူကြီးမင်းကို လာရောက် ခေါ်ဆောင် တော့မှာမို့ အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ထားဖို့ အကြောင်းကြားတာပါ ဒါပါပဲ” …..ဂွပ်…. “တိန်”(မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်) ရီမောခြင်းဖြင့် ဘဝအမောတွေ ပြေပါစေ
ထီဖှငျ့တဲ့ မနကျမှာ ဘဝကို ပွောငျးလဲသှားစတေဲ့ ဖုနျးတကော
ဖုနျးသံမွညျလာလို့ ကွညျ့လိုကျတော့ နံပါတျကအစိမျးကွီး ဘယျကပါလဲဆိုပွီး ဖုနျးကိုငျလိုကျတော့… “ဟယျလို ထီဆိုငျကပါခငျဗြ…” ဝုနျးကနဲထထိုငျလိုကျပွီး ကတုနျကရငျဖွဈသှားတဲ့စိတျတှကွေောငျ့ စကားလုံးတှတေောငျ ရဈသမျမမှနျခငျြတော့ပါ။
“ဟယျလို ဟယျလို ဟုတျကဲ့ပွောပါ” “ထီဆိုငျက ထီမြားထိုးထားသေးလားဗြ” “ဟာ…ဟုတျ ထိုးတာပေါ့ဗြာ အဲ့ထီသညျဆီက ကြှ နျတျောလတိုငျးထိုးတာဗြ ဒီတဈပါတျမှာလညျး ထိုးထားပါတယျဗြ…”
စကားတှေ ကရားရလှေတျတှေ ပွောမိပွီး ရငျတှကေလဲခုနျ အငျး ခွထေောကျတှပေါတုနျနတောဗတြဈဖကျက ပွောလာမယျ့ စကားကို ရငျမောစှာ စောငျ့နမေိ ခေါငျးထဲမှာရော မကျြလုံးထဲမှာပါ တိုကျတှပေျေါလာလိုကျ ၊ ကားတှမွေငျလိုကျနဲ့ပေါ့ဗြာ။ဟီးဟီး…ဖွဈနတောဖွဈနတော
“လူကွီးမငျး အဲ့ဆိုငျက ထီထိုးထားသာ သခြောရငျတော့ စိတျမကောငျးပါဘူး အဲ့ထီသညျဦးကွီး ကိုဗဈ ကူးစကျခံထားရပွီမို့ သူ့ထံမှ ထီထိုးထားသူအားလုံး ၂၁ ရကျ Q ဝငျရပါမယျ ဆေးစဈရပါမယျ….. အခုပဲလူကွီးမငျးကို လာရောကျ ချေါဆောငျ တော့မှာမို့ အဆငျသငျ့ပွငျဆငျထားဖို့ အကွောငျးကွားတာပါ ဒါပါပဲ” …..ဂှပျ…. “တိနျ”(မူရငျးရေးသားသူအား လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈပေးပါတယျ) ရီမောခွငျးဖွငျ့ ဘဝအမောတှေ ပွပေါစေ